समाचार - हीरा आभूषण बजार, प्रविधि र रोमान्स बीचको एक प्रतियोगिता
हीरा गहना बजार, प्रविधि र रोमान्स बीचको एक प्रतियोगिता
कृत्रिम रूपमा उत्पादन गरिएको हीरा १ the s० को दशकको सुरूमा देखा पर्‍यो। यद्यपि हालसालै, हीराको खेती गर्ने उत्पादन लागत खानीको हीराको लागत भन्दा उल्लेखनीय रूपमा कम हुन थाल्यो।
भर्खरको वैज्ञानिक र प्राविधिक प्रगतिहरूले प्रयोगशाला-उत्पादित हीराहरूको निर्माण लागतमा ठूलो गिरावट आएको छ। सामान्यतया, हीरा खेतीको लागत खनन हीराको लागत भन्दा %०% देखि %०% कम छ। यो प्रतियोगिता, अन्तिम विजेता को हुनेछ? के यो खनिज हीरा हो जुन प्राकृतिक रूपमा जमिनमुनि बनिन्छ, वा यो प्रविधिद्वारा सिर्जना गरिएको हीराको खेती हो?
हीरा र खानीको हीरा खेती गर्ने प्रयोगशालाको समान भौतिक, रसायनिक, र अप्टिकल घटक हुन्छन् र खानीको हीरा जस्ता उस्तै देखिए। अत्यधिक उच्च तापक्रम र उच्च चाप वातावरणमा, ल्याबहरूले खनिज हीराको चरणहरूको नक्कल गर्न हीरा विकास गर्दछ, सानो हीराको बीउबाट ठूलो हीरामा बढ्दै। प्रयोगशालामा हीरा विकास गर्न केही हप्ता मात्र लाग्छ। जे होस् खानीको हीरा खान्ने समय लगभग उस्तै हो तर भूमिगत हीरा बनाउनको लागि लिइएको समय सयौं लाखौं वर्षको हो।
हीराको खेती रत्न व्यापार मार्केटमा अझै बाल्यावस्थामा छ।
मोर्गन स्टानले इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको रिपोर्टका अनुसार प्रयोगशालामा विकसित हिराको नराम्रो बिक्री 75 75 करोडबाट २२२ करोड अमेरिकी डलरसम्म रहेको छ, जुन विश्वव्यापी हीरा रफको १% मात्र हो। यद्यपि २०२० सम्म मोर्गन स्टानले अपेक्षा गरे कि प्रयोगशालाले उत्पादित हीराको बिक्री बजारको १%% सानो हीराको लागि (०.8 less वा कम) र .5..5% ठूलो हीरा (०. 0.18-क्यारेट र माथिको) को लागी हुनेछ।
खेती गरिएको हीराको उत्पादन पनि हाल थोरै छ। फ्रुस्ट एण्ड सुलिभन कन्सल्टि fromका तथ्यांकका अनुसार २०१ 2014 मा हीराको उत्पादन केवल ,000,000०,००० क्यारेट मात्र थियो, जबकि खानी गरिएको हीराको उत्पादन १२ करोड c० लाख क्यारेट थियो। परामर्श फर्मले अपेक्षा गरेको छ कि अधिक लागत प्रभावी रत्नहरूको लागि उपभोक्ताको मागले २०१ 2018 मा बढाइएको हीराको उत्पादनलाई बढावा दिनेछ र २०२26 सम्ममा यो बढेर २ करोड क्यारेट हुनेछ।
CARAXY हीरा टेक्नोलोजी हीरा खेतीको लागि घरेलु बजार मा अग्रणी हो र चीन मा व्यापार संचालन गर्न आईजीडीए (अन्तर्राष्ट्रिय संघ को हीरा को खेती) को पनि पहिलो सदस्य हो। कम्पनीका सीईओ श्री गुओ शेंग भविष्यमा हीरा खेतीको बजार विकासको बारेमा आशावादी छन्।
२०१ 2015 मा व्यापार सुरू भएदेखि नै, CARAXY को प्रयोगशाला-उत्पादित हीराको बिक्री वार्षिक बिक्रीमा तीन गुणा भएको छ।
CARAXY सेतो हीरा, पहेंलो हीरा, निलो हीरा र गुलाबी हीरा खेती गर्न सक्छन्। वर्तमानमा, CARAXY हरियो र बैजनी हीरा खेती गर्न कोशिस गर्दैछ। चिनियाँ बजारमा प्राय: प्रयोगशालामा उगिएका हीरा ०.ara क्यारेट भन्दा कम छन्, तर CARAXY ले हीरा बेच्छ जुन white क्यारेटको सेतो, पहेंलो, निलो र २-क्यारेट हीरामा पुग्न सक्छ।
गुओ शेंगको विश्वास छ कि टेक्नोलोजीमा सफलताले हीरा आकार र रंगको सीमा तोड्न सक्छ, जबकि हीरा काट्ने लागत घटाउने, ताकि अधिक उपभोक्ताहरूले हीराको आकर्षणको अनुभव गर्न सक्दछन्।
रोमान्स र प्रविधि बीचको प्रतिस्पर्धा झनै तीव्र भएको छ। कृत्रिम रत्नका विक्रेताहरूले उपभोक्ताहरूलाई गुनासो गरिरहन्छन् कि हीराको शोषणले वातावरणलाई ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ, साथै नैतिक मुद्दाहरू पनि “रक्त हीरा” मा संलग्न छ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको एक स्टार्ट-अप हीरा कम्पनी डायमंड फाउन्ड्रीले दाबी गर्छ कि यसको उत्पादनहरू "तपाइँको मानहरु जत्तिकै भरपर्दो छ।" २०० movie को फिल्म ब्लड डायमंड्समा अभिनय गर्ने लियोनार्डो डिक्याप्रियो (सानो प्लम) कम्पनीका लगानीकर्ताहरूमध्ये एक थिए।
२०१ 2015 मा, विश्वका सात ठूला हीरा खनन कम्पनीहरूले DPA (डायमंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएसन) स्थापना गरे। २०१ 2016 मा, उनीहरूले "वास्तविक दुर्लभ दुर्लभ हो" भन्ने अभियान सुरू गरे। दुर्लभ हीरा हो। "
खनन डायमण्ड जायन्ट डी बियरले विश्वव्यापी बिक्रीको एक तिहाइ हिस्सा ओगटेको छ, र विशाल सिन्थेटिक हीराको बारेमा निराशावादी छ। डी बियर अन्तर्राष्ट्रिय डायमंड ग्रेडिंग एण्ड रिसर्च इन्स्टिच्युटका अध्यक्ष जोनाथन केन्डलले भने: “हामीले विश्वभरि व्यापक उपभोक्ता अनुसन्धान गरेका थियौं कि उपभोक्ताहरूले सिंथेटिक हीराको माग गरे। तिनीहरू प्राकृतिक हीरा चाहन्थे। "
"यदि मैले तपाईंलाई एक सिंथेटिक हीरा दिएँ र तपाईंलाई 'म तपाईंलाई माया गर्छु' भनेर भन्नु भयो भने, तपाईं छोउनुहुनेछैन। कृत्रिम हीरा सस्तो, कष्टप्रद, कुनै पनि भावना व्यक्त गर्न असमर्थ छ, र म तपाईंलाई माया गर्छु भनेर मात्र भन्न सक्दैन। ” Kendall रोड जोडीयो।
फ्रान्सेली ज्वेलर भ्यान क्लीफ एन्ड अर्पल्सका अध्यक्ष र सीईओ निकोलस बोसले भने कि भ्यान क्लीफ र आर्पल्सको उत्पादनले सिन्थेटिक हीराको प्रयोग कहिले गर्दैन। निकोलस बोसले भने कि भ्यान क्लीफ र अर्पल्सको परम्परा केवल प्राकृतिक खानीको रत्नको मात्र प्रयोग गर्नु हो, र उपभोक्ता समूहले समर्थन गरेको “बहुमूल्य” मानहरू प्रयोगशालाले हीरा खेती गर्ने होइनन्।
कर्पोरेट विलय र अधिग्रहणको प्रभारी एक विदेशी लगानी बैंकका बेनामी बैer्करले चाइना डेलीसँग एक अन्तर्वार्तामा भनेका थिए कि जनताको उपभोग अवधारणाको निरन्तर परिवर्तन र “हीराको दिगो चिरस्थायी” आकर्षणको क्रमिक घाटाले कृत्रिम रूपले खेती गरिएको हीराको बजार हिस्सा हुनेछ। वृद्धि गर्न जारी। किनभने कृत्रिम रूपले खेती गरिएको हीरा र प्राकृतिक खनित हीरा समान रूपमा देखा पर्दछ, उपभोक्ता खेती गरिएको हीराको अधिक किफायती मूल्यहरूले आकर्षित गर्छन्।
यद्यपि, बैंकर विश्वास गर्छन् कि हीराको शोषण लगानीका लागि उपयुक्त हुन सक्छ, किनभने खस्कँदै गइरहेका हीराले उनीहरूको मूल्य निरन्तर बृद्धि गर्दछ। ठूला-क्यारेट हीरा र उच्च-श्रेणीको दुर्लभ हीरा धनी व्यक्तिको हृदय बनेका छन् र ठूलो लगानी मूल्य छ। उनी विश्वास गर्छन् कि हीराको प्रयोगशालाको खेती आम उपभोक्ता बजारमा थप पूरक हो।
अनुसन्धानको अनुमान छ कि खानीको हीराको उत्पादन २०१ 2018 वा २०१ in मा शिखर हुनेछ, त्यसपछि उत्पादन बिस्तारै घट्नेछ।
केन्डल दाबी गर्छन् कि डी बियरको हीरा आपूर्तिले "केहि दशक" लाई पनि सहयोग पुर्‍याउन सक्छ, र नयाँ ठूलो हीरा खानी भेट्टाउनु धेरै गाह्रो छ।
गुओ शेंगको विश्वास छ कि उपभोक्ताहरूको भावनात्मक अपिलनको कारण, विवाहको रिंग बजार प्रयोगशालाहरूमा हीरा खेती गर्न चुनौतीपूर्ण छ, तर गहना र गहनाको उपहारको दैनिक पोशाकको रूपमा प्रयोगशालाले उत्पादित हीराको बिक्री छिटो बढेको छ।
यदि कृत्रिम रत्न ढु natural्गा प्राकृतिक रत्नहरुमा प्राकृतिक तत्वहरु द्वारा बेचिन्छ, कृत्रिम रत्नको बढ्दो बजार गर्मी उपभोक्ताहरु को लागी एक सम्भावित खतरा हो।
डी बियरले हीरा निरीक्षण टेक्नोलोजीमा धेरै पैसा लगानी गर्‍यो। यसको भर्खरको सानो हीरा निरीक्षण उपकरण, AMS2, यो जुन उपलब्ध हुनेछ। AMS2 को पूर्ववर्तीले ०.०१ क्यारेट भन्दा कम हीरा पत्ता लगाउन सकेन, र AMS2 ले लगभग ०.०० ० क्यारेट जति सानो हीरा पत्ता लगाउन सम्भव बनायो।
खानी को हीरा भन्दा फरक गर्न, CARAXY का उत्पादनहरु सबै प्रयोगशाला-हुर्काएको लेबल लगाईन्छ। केन्डल र गुओ शेंग दुबैले विश्वास गर्दछन् कि बजारमा उपभोक्ताहरूको आत्मविश्वास जोगाउनु र यसलाई बृद्धि गर्नु महत्त्वपूर्ण छ ताकि गहनाका ग्राहकहरूलाई उनीहरूले कस्तो किसिमको हिरा किन्न महँगो मूल्यमा किन्दैछ।
पोष्ट समय: Jul-02-2018